प्रभावहीन बन्दै महत्त्वाकांक्षी स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम, ४३% बिमितले मात्र गराए नवीकरण – Health Post Nepal
प्रभावहीन बन्दै महत्त्वाकांक्षी स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम, ४३% बिमितले मात्र गराए नवीकरण
२०७६ पुष २० गते १९:३३
सबै नागरिकलाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्दै संवैधानिक हक प्रत्याभूत गराउने योजनाअनुरूप सरकारले ४ वर्षअघि सुरु गरेको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएको छ । सरकारको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमका रूपमा २५ चैत ०७२ मा कैलाली र बाग्लुङबाट सुरु गरिएको कार्यक्रम हालसम्म ४९ जिल्ला विस्तार भएको छ । बिमितले तोकिएको सुविधा नपाएपछि बिमा नवीकरण गर्नेको संख्या निरन्तर घट्दै जाँदा कार्यक्रम नै संकटमा पर्दै गएको छ ।
स्वास्थ्यबिमाको विषयमा अहिले जनमानसको एउटै धारणा छ– कार्यक्रम त राम्रो हो, तर सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्दा बिमाप्रति आकर्षण घट्दो छ । जुन उत्साहका साथ ४ वर्षअघि स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो, सोहीअनुरूप सेवामा प्रभावकारिता नहुँदा जनतामा निराशा छाएको पाइएको छ ।
तोकिएको शुल्क तिरेर एक वर्षका लागि बिमा गराएपछि अर्को वर्ष सेवा प्राप्त गर्न पुनः प्रिमियम बुझाएर बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बिमा गरेबापत पाउनुपर्ने उपचार सेवा प्रभावकारी नहुँदा बिमा नवीकरण गर्ने नागरिकको संख्या घट्दै गएको छ ।
४३.३९% बिमितले मात्र गराए बिमा नवीकरण
गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यबिमा गराएका बिमितमध्ये ५६.६१ प्रतिशतले चालू आवमा बिमा नवीकरण नै गराएनन् । बिमा कार्यक्रममा आबद्ध बिमितमध्ये चालू आवमा ४३.३९ प्रतिशतले मात्र बिमा नवीकरण गराएको स्वास्थ्यबिमा बोर्डको तथ्यांक छ । बोर्डका अनुसार बिमा नवीकरण नगराउनेमा अधिकांश महिला र ६० वर्षमाथि उमेरका छन् ।
चालू आवको पहिलो ४ महिना (साउन–कात्तिक) मा स्वास्थ्यबिमा लागू भएका ४६ जिल्लाबाट ७ लाख ३१ हजार ६ सय ८७ जनाले बिमा नवीकरण गराएको बोर्डको तथ्यांक छ, जब कि ती जिल्लामा १६ लाख ८६ हजार २ सय २९ जनाले गत वर्ष स्वास्थ्यबिमा गराएका थिए ।
कुन प्रदेशमा कति बिमित ? कतिले गराए नवीकरण ?
कार्यक्रम लागू भएदेखि हालसम्म प्रदेश १ मा जम्मा बिमितको संख्या ४ लाख १३ हजार ४ सय १५ रहेकोमा चालू आवको ४ महिनामा जम्मा १ लाख ५२ हजार २ सय २५ अर्थात् ३६.८२ प्रतिशतले मात्र नवीकरण गराएका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश २ मा ४५ हजार ८९ जना बिमितमध्ये २ हजार ३ सय ९८ जनाले मात्र नवीकरण गराएका छन् । यो संख्या प्रदेशका कुल बिमितको ५.३१ प्रतिशत मात्र हो ।
सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ का बिमितले बिमा नवीकरण गराएका छन् । प्रदेश ३ मा ३ लाख ६९ हजार ८ सय ९० हजारले बिमा गराएकोमा १ लाख ८३ हजार ३ सय ६६ जना अर्थात् ४९.५७ प्रतिशतले नवीकरण गराएका छन् ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा २ लाख ५५ हजार ४ सय २३ जना बिमितमध्ये १ लाख १९ हजार ९ सय ६३ जनाले नवीकरण गराएका छन्, जुन कुल बिमितको ४६.९६ प्रतिशत हो । प्रदेश ५ मा ३ लाख ११ हजार ५ सय ५४ जनाले स्वास्थ्यबिमा गराएका थिए, जसमध्ये १ लाख ५८ हजार ५ सय २४ जनाले यस वर्ष नवीकरण गराएका छन् । यो कुल बिमितको ५०.८८ प्रतिशत हो ।
स्वास्थ्यसेवाको अत्यन्त न्यून पहुँच भएका कर्णाली प्रदेशवासीलाई पनि स्वास्थ्यबिमाले आकर्षित गर्न सकेको देखिँदैन । यस प्रदेशका १ लाख २४ हजार ५ सय २० जनाले बिमा गराएकोमा जम्मा ३७.१४ प्रतिशतले मात्र यस वर्ष नवीकरण गराएका छन् । यहाँका बिमितमध्ये ४६ हजार २ सय ५० जनाले मात्र तोकिएको अवधिमा बिमा नवीकरण गरेका हुन् ।
त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ लाख ६६ हजार ३ सय ३८ जनाले स्वास्थ्यबिमा गराएकोमा ४१.४५ प्रतिशतले मात्र नवीकरण गराएका छन् । यहाँका ६८ हजार ९ सय ६१ बिमितले मात्र बिमा नवीकरण गराएका हुन् । तोकिएका स्वास्थ्यसंस्थामा निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि उपलब्ध नहुनु, बिमा गरेका बिरामीलाई स्वास्थ्यकर्मीले बेवास्ता गर्नु, सरकारले तोकेकै स्वास्थ्यसंस्थामा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता हुँदा सेवा लिन कठिनाइ हुनुलगायत कारणले स्वास्थ्यबिमाप्रति आममानिसको आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ ।
२५ लाख नेपाली बिमामा आबद्ध, ८ लाख ८२ हजारले लिए उपचार सेवा
कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म २४ लाख ४६ हजार ८ सय ५९ नेपाली बिमामा आबद्ध भएका छन् । हालसम्म कुल बिमितमध्ये एकतिहाइले मात्र उपचारसेवा लिएका छन् । बोर्डका अनुसार ८ लाख ८२ हजारले उपचार सेवा लिएका हुन् ।
बिमितले अपेक्षाअनुसार बिमा नवीकरण नगराएको बोर्डका सूचना अधिकारी कृष्ण अधिकारी बताउँछन् । सेवाप्रदायक संस्थाहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्नु नै बिमा नवीकरणमा बिमितको उत्साह कम हुनुको प्रमुख कारण रहेको उनी मान्छन् ।
‘सेवाप्रदायक संस्थाहरूले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसक्नु, औषधि नपाइनु र बिरामीले सेवा लिनका लागि टाढासम्म धाउनुपर्ने बाध्यताले पनि नवीकरण दर घटाइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।
हाल स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रम ४९ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार एक महिनाभित्रै अन्य ११ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी बोर्डको छ । ‘हाम्रो अपेक्षाअनुसार बिमित बढेका छैनन्,’ अधिकारीले भने, ‘यसमा बिमा समितिदेखि सेवाप्रदायकसम्मका कमजोरी मुख्य कारण रूपमा छन् ।’
बिमा कार्यक्रम लागू भइसकेपछि सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ । तर, स्वास्थ्यसेवा सहज रूपमा उपलब्ध नहुने, सेवा लिनका लागि लामो समयसम्म हिँडेर जानुपर्ने तथा लामो समय कुर्नुपर्ने, आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुनेजस्ता समस्या बिमितले झेलिरहेका छन् । बिमा कार्यक्रमले गुणस्तरीय सेवा जनतामा पुर्याउन नसकेका कारण कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको बोर्डले बताउँदै आएको छ ।
मुलुककै उपचार केन्द्र त्रिवि शिक्षणमा छैन बिमासेवा
बोर्डले हालसम्म देशभर जम्मा २ सय ३२ वटा स्वास्थ्यसंस्थासित बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवाप्रवाहका लागि सम्झौता गरेको छ । यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत सरकारी र २० प्रतिशत निजी स्वास्थ्यसंस्था रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । तर, मुलुककै उपचारको केन्द्र मानिने महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल भने यसमा समावेश छैन । देशभरबाट बिरामी रेफर भएर आउने सरकारी स्वामित्वको त्रिविअन्तर्गतको टिचिङ अस्पतालसित हालसम्म सम्झौता हुन नसक्दा बिमितलाई गुणस्तरीय सेवा दिनमा समस्या भइरहेको छ ।
बिमा गरेपछि आफ्नो नजिकमा रहेको तथा आफ्नो रोग र आवश्यकताअनुसारको जुनसुकै अस्पताल वा स्वास्थ्यसंस्थामा सेवा पाउने व्यवस्था भएमा बिमाप्रति आकर्षण बढ्ने निश्चित छ । यसका लागि सरकारले देशभरमा २८८ वटा मात्र नभएका सबै प्रमुख स्वास्थ्यसंस्थासित बिमासेवाका लागि सम्झौता गर्नु आवश्यक छ ।
हाल तोकिएका २८८ स्वास्थ्यसंस्थाले बिमितको निःशुल्क उपचारका साथै तोकिएका १ हजार १ सय ३८ प्रकारका औषधि निःशल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पर्याप्त मात्रामा औषधि समावेश नहुँदा तथा तोकिएका औषधि पनि स्वास्थ्यसंस्थामा उपलब्ध नहुने भएका कारण बिमितले औषधि नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन ५ जनासम्म सदस्य भएको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसबापत सो परिवारले एक वर्षभित्र एक लाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क पाउँछ । तर, ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले भने पाँचजनाभन्दा माथिका प्रतिसदस्य थप ७ सय रूपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एकपटक गरेको बिमाको अवधि एक वर्ष मात्र हुने भएकाले प्रतिवर्ष उत्ति नै प्रिमियम रकम बुझाएर बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बिमितलाई बिमा नवीकरणमा आकर्षित गर्न नसकिँदा समग्र कार्यक्रम नै प्रभावहीन बन्दै गएको हो ।